Inkululeko yokuNcitshiswa kancinci - Umculo
Inkululeko yokuNcitshiswa kancinci
Akukho ukungamhloniphi uFrancis Scott Key, kodwa ukuba sikhe saya emarikeni ngomhobe wesizwe omtsha, sinokwenza okubi ngakumbi kuneNtombazana Yakho yaseMelika eyiMitski. Ingoma yimbali epheleleyo ezayo ezayo, engacacanga, kwimizuzu engaphezulu kwemithathu, kwaye umlobi-umbhali wengoma oneminyaka engama-25 ubudala uMitski Miyawaki uyihambisa kwilizwi elirhabaxa elakha ngesiquphe njengoko, kanye xa i-chorus ibetha, i-pedal pedal yakhe iyatshisa njenge-firework yasehlotyeni. Uyinkwenkwe yonke yaseMelika, uyakhwaza ngaphezulu kwedin. Ndiyicinga ukuba andinakukunceda ukuzama ukuba yintombazana engcono yaseMelika. Ingoma malunga nokuzama ukufikelela kulindelo olungenakwenzeka, ngokungaphumeleli ukusilela, kwaye ekugqibeleni wenze uxolo nenyani enesiphene. Ingoma yaseMelika.
Ikwangumntu okhokelayo kwi-albhamu entsha kaMitski, Ukufikisa 2. (Yima, ngaba uza kuyibiza loo nto? Impendulo yakhe yokuqala yomphathi.) Umbono wesihloko sealbham, undixelela xa sidibana nesidlo sasemini ngasekupheleni kukaMeyi, weza kuye ngelixa wayechitha ixesha elithile indlu yabazali bakhe. Ndiya kuba neentlobo ezifanayo zeengcinga kunye neencoko, kwaye ndiye ndilwe nabazali bam ngokungathi bendikwishumi elivisayo. Kunje, ‘bendicinga ukuba ndiphumelele koku. Ukufikisa kubuyela emva! '
Kuyaqondakala ukuba kutheni umntu enokubhabha kweso sihloko: Kule minyaka ilishumi idlulileyo okanye kunjalo ubone unogumbe hayi nje umculo, iimuvi, kunye nemidlalo yeTV malunga nengxaki ebizwa ngokuba yikota-yobomi, kodwa imboni yokwenyani yenyani ye-intanethi #umxholo owenza indawo yonke ukwenziwa ngokubanzi malunga nesi sigaba sobomi. (Jonga, umzekelo: I BuzzFeed Uluhlu Iimpawu ezingama-25 Unengxaki yeKota-yoBomi. Kugwetywe isihloko sayo kuphela, i-albhamu ibizwa Ukufikisa 2 kungenzeka ukuba ibe lilinge lokukhwela la maza, ukwenza ihlaya eliba mandundu ngaphambi kokuba umgca wepunch uhlasele. Kodwa ngethamsanqa, ayizizo ezi zinto; I-Mitski idibanisa ii-clichés kunye neenkolelo kunye ne-idiosyncrasies yengoma yakhe yokubhala.
empuma vs entshona nba irekhodi
Umculo wakhe uphila ngobukrelekrele, ii-pathos, kunye neengoma ezimnandi-ezinje ngeengoma zomculo we-punk-rock malunga nezinto zanamhlanje zaseMelika. Abantu beengoma zakhe bazama ukuhamba kwihlabathi apho ubudlelwane obuzinzileyo, ubudlelwane bendabuko buhlala buziva ngathi bungafuneki kakhulu, kodwa kumaxesha abo abucala basabanqwenela kunjalo. (A track called I Bet on Losing Dogs is-actually, kind of - a love song.) Iingoma zakhe ngamanye amaxesha zibuhlungu kodwa zihlala zinethemba, ziqhutywa ngumnqweno wokuphuma kwimida ebekwe kuye luluntu, imeko, okanye mhlawumbi isiqu sakhe kuphela. Enye yezinto endizithandayo Ukufikisa 2 , Umzimba wam Wenziwe ziinkwenkwezi ezityumkileyo ezincinci, yingoma yemizuzu emibini evakala ngathi uAlanis Morissette ebeka iMentos kwibhotile yeDiet Coke. (Mamela undixelele ukuba andilunganga.) Embindini wengoma, ngokungxamisekileyo ngathi inokuba ngamazwi akhe okugqibela, uMitski uyakhwaza, Ndifuna ukubona umhlaba wonke! Ndifuna ukubona umhlaba wonke! Andazi ukuba ndiza kuyihlawula njani irente! Ndifuna ukubona umhlaba wonke!
Ngaphezulu okanye ngaphantsi, sele enayo. Nangona wayengummi wase-U.S., UMitski akazange ahlale ngokwenene eMelika ade abe kwishumi elivisayo; Umsebenzi katata wakhe wawufuna uhambo lwamazwe aphesheya, ngenxa yoko wachitha ubutsha bakhe bungqongqo kwihlabathi liphela, ukusuka eJapan ukuya eChina ukuya eTurkey ukuya kwiDemocratic Republic of the Congo.
Ndandingumntu ongaqhelekanga kwaye ndingahlali ndawo, utsho ngeminyaka yakhe yokukhula. Kwakukho ke lo mhlaba wasentsomini ubizwa ngokuba yiMelika endandivela kuwo ngokwenyani. Njengokuba yayiyindlela yolutsha, i-intanethi ekhawulezayo yesantya esiphezulu, yazuza njengelona candelo lidumileyo lenkcubeko yaseMelika, kwaye ubuncinci iinyanga ezimbalwa emva kwexesha ( Abahlobo , IiSimps , Britney Spears, Justin Timberlake - leyo yayiyimfundo yam.) Wayesoloko ephupha ngelizwe lakhe, apho zazivela khona ezi mveliso zenkcubeko, zijolise nje ngokungathi yiEmerald City. EMelika, ndingangumntu owahlukileyo kwaye ngabakhe , uthi wayecinga.
Kwaye ke uMitski wafika apha-wehla, kuzo zonke iindawo, kwisikolo esiphakamileyo sikarhulumente eBirmingham, Alabama. Kwaye ndafana, ' Ohhhh , ’Wahleka. Xa bendikwenye indawo, bendinolu luvo, ‘ndohlukile kuba ndivela kwinkcubeko eyahlukileyo.’ Nangona apha, ibingathi, ‘Hayi, ndohlukile’ kuba mangalisi . ’
Mna noMitski sinezicwangciso zokudibana ngoMhla weSikhumbuzo. Kubekho ingxoxo yokuba ingaba oku kuthetha ukuba kufuneka senze into ngeSikhumbuzo-isihloko, kwaye oko kuthetha ntoni-ukuya kumngcelele? ukutshayisa i-barbecue yomhlobo-womhlobo-womhlobo? -Ngaphambi kokuba sivume ukuba eyona nto singayenza ngoSuku lweSikhumbuzo kukubuyisela imizimba yethu ebuhlungu kusuku lokugqibela lwento esele iyiveki yeholide ende. Siya kwindawo yokutyela kwaye ndi-odola ukutya kwasekuseni okwesibini ngala mini; UMitski uneti yejinja. Ngale ntsasa ndaziva ndinezothe, uyachaza. Kodwa nditsho nokuphola, imbeko ecekisekayo. Nditya nje ukutya okumnandi phezolo.
inqanaba lezempilo lamar odom
Andilahlekiswanga ngokupheleleyo ekulindeleni ukuba ndirhwebe amabali emfazwe; Enye yezinto ezonwabisayo ngeengoma zikaMitski kukuba babonisa abantu basetyhini abasela ngokungathandabuzekiyo, abatshayayo, abelana ngesondo (okanye indibaniselwano yoko; kwirekhodi yakhe yokugqibela: anditshayi, ngaphandle kokuba ndikubambile, sana) kwaye ngokubanzi benza zonke iindlela zezinto de kube ngoku ababhali beengoma abangamadoda bacule malunga ngokukhululekileyo kunabafazi. UMitski uza ngexesha apho ilizwe le-indie-rock (ekugqibeleni) lixhasa ngakumbi iimbono zabasetyhini ezinzima, enkosi kwimpumelelo yezenzo ezenziwa ngabasetyhini ezifana neWaxahatchee, iSwearin ', kunye neSpeedy Ortiz. Kodwa kukho inyani-yenyani yokuthetha ngokungathandabuzekiyo kwimidlalo yakhe yesini ngakumbi ukuba ilizwe le-indie alikhange livile ukusukela kwiintsuku zokuqala zikaLiz Phair. Njengokukhula kwabaphulaphuli abangathi, nangasiphi na isizathu, bangabinakho ukuyiphatha le nto, Ukufikisa 2 iqala ngehlaya elingcolileyo, nangona-umlobi we-lytist kunye ne-punny ukuba uMitski- ekugqibeleni ude abe yinto enomdla ngakumbi. Ingoma yokuqala yecwecwe kuthiwa Wonwabile, intsomi yaseSt.Vincent-esque apho uMitski amnika khona uthando lomdla isiteketiso. Uye wandilalisa, ndaziva ndonwabile engena ngaphakathi kum, uyacula. Wandibeka phantsi, ndaziva ndonwabile…
Ubomi bukaMitski abukho sasendle kwezi ntsuku, ubuncinci xa etyelele. Usachitha ixesha lakhe elininzi e-suburban Pennsylvania (Kukho ivenkile enkulu kunye nevenkile yeziyobisi, uyamangalisa), malunga nemizuzu engama-30 ngaphandle kwePhiladelphia. Abantu abaninzi eNew York bafudukela ePhilly kwicandelo lezentlalo, okanye icandelo lemali, kodwa ndavele ndahamba kuba ndifuna ukuya apho ndinokuthula khona, utshilo. Ukucwangcisa ingqondo yam. Ndicinga ukuba ndiyathandana, kodwa xa ndihlala, ndihlala nabanye abantu…. Ndiphantse ndixhalabile kakhulu kwabanye abantu kangangokuba xa ndikunye nabo ndijolisa kubo kakhulu. Ke ndifuna ukuzisusa ukuze ndibengumntu.
Ubuye enze eyona nto ayibhalayo yedwa. Ukhumbula ngokucacileyo ukuqala kwakhe ukubhala ingoma: WayeseTurkey, eneminyaka eli-17 ubudala, kwaye yayingo-6 okanye u-7 kusasa. Ndandinxila kakhulu, ukhumbula ehleka. Kwaye ndiye ndaqala ukubethelela ipiyano. Ndinexesha elifutshane kakhulu lokujonga, kodwa ukusela kuyandinceda ukugxila. Andisaseli nyani kwakhona, utsho ngoku. Kodwa ngelo xesha yayiyinto eyayindidibanisa. Ke ndinokujonga ixesha elide uku… ubuncinci ukugqiba ingoma.
Ungamamela uhlobo lwengoma awayibhalayo ngobo busuku (kusasa?), Kuba yaphelela kwicwecwe lakhe lokuqala njenge-winding, uFiona Apple- esque piano ballad ebizwa ngokuba yiNgxowa yeMathambo. Yinto enzima kuye ukuba ayimamele ngoku, kuba indalo yayo imele umzuzu wobuqu wokungabuyi. Kanye apho, ndibubonile ubomi bam bobabini buqala kwaye buphela ngalo mzuzu, ukhumbula ngamanqanaba alinganayo uvuyo kunye noloyiko. Njengaye, 'Nantsi into endiza kuyenza ubomi bam bonke!'
Amakhwenkwe ase ghetto anengqondo yokudlala amaqhinga
Enye into engaqhelekanga ngokubuyela kwi-PA: Abazali bakhe bahlala apho, nabo. Into engoyikiyo ngokubuyela ekuhlaleni endlwini yabazali bakho kwaye udibane nabahlobo bakho bakudala kukuba ubuyela kwakulo mntu ubucinga ukuba awusekho, utshilo. Enye yeengoma ezigqwesileyo kwi-albhamu yakhe ka-2014 Ndingcwabe eMakeout Creek (ukuya IiSimps Isalathiso kunye nodumo kubuntwana bakhe be-expat) wayebizwa ngokuba nguTownie, into encinci etshisayo malunga nokuba mncinci kwaye ulambile kwaye ufuna ukwahlukana nabantu kunye neendawo ezikwenzileyo. Andizukuba yile nto utata wam afuna ukuba ndiyiyo, uyangxola ekupheleni kwengoma, ndifuna ukuba yile nto umzimba wam ufuna ukuba ndiyiyo! Uyicula ngokonwabisa; sisibhengezo senkululeko.
Ukufikisa 2 imalunga nento entsonkothileyo kancinci-ukukhubeka ukuya ekuvuthweni, ukuthatha amanyathelo amabini athambileyo ukuya phambili kunye nenyathelo elinye ukubuya umva. Namhlanje ndiza kunxiba iqhosha lam elimhlophe, ucula yedwa kwingoma yokugqibela, ndinokucoceka / Ndiphume ndibonwe ndicocekile. Kwenye indawo, ucula ukuzamkela ngokwasemphefumlweni (uzuko, uzuko, ubuqaqawuli, ubusuku bonke obundibonisa into endiyiyo) namaphupha omthandi omncinci ngokwaneleyo ukuba angamjonga emehlweni ngexesha lokwabelana ngesondo… kwaye mhlawumbi unamathele kuye ixesha elaneleyo ukuba umbukele esifa.
Icawa kasathana twitter
Ngokunikwa ukungafihlisi kunye nokunyaniseka kwamazwi akhe, kuyalinga ukustampu umculo wakhe ngelebheli yobufazi - esandula ukuba kuyo yonke indawo kangangokuba iqale ukungangqinelani. UMitski uneemvakalelo ezixubeneyo malunga nokunyuka kwenkcubeko ye-pop yenkcubeko.
Into emnandi malunga nobufazi yinto yokuba abantu abangazukufikelela ngaphambili bayayazi, utshilo. Kudala laliligama elaliloluhlobo lokubanjiswa kwizifundo. Kwaye ngoku yinto yenkcubeko epapa, kungoko kusezandleni zabantu ngoku kwaye banokuphanda.
Ke ndilapha ukuze ibe lixesha elidumileyo, kodwa ngoku kufuneka singazinzisi intengiso yehobe kwaye sihambe ngaphaya koko. … Okwangoku kukho nje intombazana yamandla, 'abafazi bayamangalisa,' 'umhle,' umyalezo onamacala amabini. Kwaye ayikuniki nasiphi na isithuba sokuba ngumntu ogezelelweyo. Uyongeza: Ungaba ngumfazi kwaye unyanzelwe.
Inkululeko yokufumana kancinci: Mhlawumbi le yinguqulelo yenkululeko eyayisoloko ilandelwa nguMitski. Iingoma zakhe zigcwele amathemba aphezulu, ubusuku obubi, kwaye-ngokuqinisekileyo - ukuqala okutsha kusasa. Ibali laseMelika, xa ucinga ngalo. Ndikhetha ubudala xa ndiza kunyamalala, ukhwaza ngokukholelwa endle, kude kube lelo xesha ndingaphinda ndizame. Beka loo shit kwibhili yedola.
Icawa kasathana ixilongo
Iimuvi ezifakwe kwifowuni ye-iphone
Imithombo yeendaba kwizigidi ezingama-65.8
eludongeni doug liman
ophumelele umatshi wama-2019